LiDAR iyo DIELMO 3D
DIELMO 3D SL leeyahay waayo-aragnimo baaritaan ballaaran ee processing xogta LiDAR ayaa fuliyay mashaariic badan oo qeybiyaha ah iyo soo saare xogta LiDAR ee Spain, iyo sidoo kale ka 2003 waxaa soo koraya ay software gaar ah xogta LiDAR processing bixisaa horumar la taaban karo in hana u oggolaan in software ganacsi. Faa'iidada ugu weyn ee la siiyo ...
Khariidadaha la arko ee muuqaalka: Juan Nuñez Girado
Waxaan oo dhan la dhacay markii aannu u safraan, iyo raadinayso maps of magaalada aan ka heli noocan ah ee shaqada keeneen guriga in ay ku quudiyaan ururinta wax maps dheeraad ah waa shuqullo dhabta ah ee farshaxanka. Isku-xirka xogta macluumaadka ee khariidadaha ayaa sameeyay habka ...
Sitchmaps / Mapper Global, u rogaan sawirrada si ecw ama kmz
Dhowr maalmood ka hor waxaan ka hadlayey xuruufaha sawirrada Google Earth oo la yareeyey, iyadoo la adeegsanayo kml oo tixraac ah marka la kala jiidanayo. Imtixaanka Global Mapper Waxaan xaqiiqsadey in tallaabadan la iska dhaafi karo haddii aan soo rogno faylka kalibrada ee xilligan xajinta sawirka, habka aan u bedeli karno ...
Earth Google; mappers taageerada araggu
Google Earth, ka sokow inuu yahay qalab madadaalo ah dadweynaha guud, sidoo kale wuxuu noqday taageero muuqaal ah oo loogu talagalay kartoonka, labadaba si loo muujiyo natiijooyinka iyo in la hubiyo in shaqada la qabanayo ay tahay mid joogto ah; ma aha in lagu yiraahdo aaladda barbaarinta juqraafi ama fasallada geodesy. Xaaladdan, aniga ...
Google Earth KML GIS kala cayncayn ah
Cartografia, Baridda CAD / GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
UTM waxay isku duweysaa khariidadaha google
Google waxaa laga yaabaa in uu yahay qalab aan ku noolnahay ku dhawaad ​​usbuuciiba, sababtoo ah ma fikirin in maalin walba. Iyadoo codsiga loo isticmaalaa in lagu maraan oo ugu rogto iyada oo loo marayo tilmaamaha, ma aha sidaas u fudud in la arki wadataa of dhibic gaar ah, ama qaab juquraafi, UTM badan ka yar isuduwaha ee google maps. Maqaalkani, marka laga reebo waxbarista aad ...
Cartografia, Featured, Google Earth / Maps, tabo cusub
Ugu fiican ee Zonum ee CAD / GIS
Zonum Solutions waa goob ay bixiso qalabka ay sameeyeen arday ka socota Jaamacadda Arizona, oo waqtigiisii ​​firaaqada ahaa ee loo qoondeeyay in lagu xalliyo arrimaha la xidhiidha qalabka CAD, khariidadaynta iyo injineeriyadda, gaar ahaan faylka kml. Waxaa laga yaabaa in waxa loo baahday ay ahayd in lagu siiyay lacag la'aan, iyo haddii ...
Cartografia, Google Earth / Maps, GPS / Qalabka, Engineering
Sawirrada muuqaalka iyo fiidiyoowga dhulgariirka iyo tsunami ee Japan
Taasi waa sidaasi oo kale. Iyada oo ku yaala galbeedka Europe iyo America ilaa jiray ayaa hurdo wanaagsan ee aan maray, ku dhowaad 9 dhulgariir on qiyaasta Richter ku dhuftay Japan markii ay ka baxsan galabta 3 ah. Eeg videos ee sida biyo galo iyo jiididda guryaha, baabuurta iyo doonyaha waa mid gaar ah. Waxay leedahay ...
Muuqaalka Magaalooyinka, Mawduuca 2011
Arrinta dadku waxay noqon doontaa mid la yaab leh sannadkan - iyo kuwa soo socda - sababtoo ah ma jiraan wax badan oo lagu sameeyo xallinta xalalka caalamiga ah. Sannadkan diirada saad ee Juquraafi Qaran waa dhab ahaan dadweynaha adduunka oo ku saabsan hannaanka hagaajinta biladaha 7. Daabacaadda Janaayo waa mid caadi ah. ...
Cartografia, Google Earth / Maps, tabo cusub
Maaddaama ay nagu kharashgareyneyso inaan sawir ka qaadno miiska sawirrada ... Miyay kartuuniyiintu ku khasbanaanayaan inay ku noqdaan booskaas? Mawduuca waxaa laga wada hadlayaa heer guud, mana aha khalad. Waan hubaa inaan ku jirno inaan aragno kombuyuutarada macaamiisha sida xafiiska boostada ...
Sida Mapserver shaqeeya
Waqtigii hore ee aan ka hadalnay shuruudaha qaarkood sababta MapServer iyo aasaaska muraayadda. Hadda waxaan ku aragnaa qaar ka mid ah hawlgalkooda jimicsiga khariidadaha Chiapanecans. Meesha ay ku xirantahay Marka la xiro Apache, buugga tusaha ah ee MapServer waa qormo OSGeo4W toos ah C: / gudaha, waxaa jira ...
Google Earth GIS kala cayncayn ah mapserver SHP
Si aad u hesho waxoogaa xiiso leh, todobaadkan waxaa lagu daabacay 20minutos.es maqaal ku saabsan mawduucyada saadaasha, oo leh codka sharraxaya macalinka fasalka lixaad markaad ka hadlaysid khariidadaha mundi. Waxaa habboon in la eego faallooyinka, niyadjab - macquul - in ay jiraan dad badan, laakiin halkan ...
Beddelaan degrees / daqiiqo / ilbiriqsi jajab tobanle
Waqtigaan ka hor waxaan weydiistay arrintan, tan iyo markii saaxiibku u muuqdo mid xoogan oo maanta waa maalin lagu dabaaldego waxyaabo badan, halkan waa qalab kuu oggolaanaya inaad u bedesho isuduwayaasha juqraafiyeed, heerka darajooyinka. Sababta miisaanka is-beddelka Waa caadi in la helo isku-duwayaasha ku jira darajada, daqiiqadaha, ilbiriqsiga, ...
rasiidh Google Earth Xafiiska dilaaga ah
Euroatlas: Khariidadaha hore ee qaabka shp
Waxaa dhacaya in taageerayaasha maps ee supermarket ka iibsan wargeys kaliya keeno a map foldout waaweyn ama khariiradda ah in ku darayaa in ururinta wixii horay aan heysano. Ansixinta 'Episcopedias' waxay sameeyeen intii ugu fiicneyd si ay u muujiyaan khariidado un ka mid ah interactive Flash ama horumarin ah oo simta qalliinka ...
Cartografia, tabo cusub
Ka shaqeynta xadka labada-xadka UTM
Waxaan inta badan haysannaa dhibaatada ka jirta xadka UTM UM, waxaananu isu aragnaa ulaha sababtoo ah iskudhafyada aan shaqayn. Sababtoo ah dhibaatada A ka hor inta aan sharaxaad ka bixiyay sida UTM isku duwo shaqada, halkan waxaan ku socdaa inaan diirada saaro dhibaatada. Jaantuska soo socda ayaa muujinaya sida udhaxeysa Costa Rica, Honduras ...
Maktabadda Digital Digital
Laga soo bilaabo 2005 Maktabadda Congress iyo UNESCO waxay dhiirigelisay fikradda ah maktabadda internetka, ugu danbeyntii April 2009 waxaa si rasmi ah loo furay. Waxaa lagu daraa tiro badan oo ah ilo tixraac ah (sida Europeana), oo leh kala duwan, kaas oo lagu taageerayo maktabadaha dalal kala duwan iyo waxqabad dhaqaale ...
3D Khariidadda Adduunka, khariidad waxbarasho
Khariidadda 3D World wuxuu yimaadaa inoo xusuusiyo meelahaas loo isticmaalo iskuulada, inkastoo kartidiisa ay ka baxsan tahay. Waa botton oo ku jira macluumaad badan oo ka badan inta uu ku haboonaan karo adduunka iyo atlas, sidoo kale waxaa ku jira shaashadda shaashadda leh filim oo ku ciyaari kara muusikada ...
Xagee laga helaa khariidadaha qaab vector ah
Helitaanka khariidadaha qaabka vector ee waddan la yiraahdo waxay noqon kartaa mid deg deg ah. Akhrinta forum Gabriel Ortiz Waxaan helay xiriirkan oo ah mid xiiso leh maxaa yeelay maaha oo keliya khariidado ku jira qaababka .shp, laakiin sidoo kale kml, grid iyo mdb. Waa gData, adeega ayaa kor u qaaday Machadka Cilmi Baarista Caalamiga ah, ...
Omen, taladayda loogu talagalay filimada
Bilaabbadu waa filim Nicolas Cage, oo aan ku talinayay booqdayaashan boggaan oo ah kuwa xoojinaya xidhiidhka lat / long coordinates. Uma maleynayo inaan kuu sheego sheekada sababta oo ah xiisaha lumay laakiin sida dhabta ah waa caleen caleen leh lambar gabar ah oo ku jirta lixda sano ee qoraagu ku qoro oo lagu dhejiyo kumbuyuutar ...
Cartografia, Leisure / waxyi